Iyo terevhizheni app, iro ramangwana remultimedia masevhisi kubva kuApple | IPhone nhau
Iyo yeApple app, iro ramangwana remultimedia masevhisi kubva kuApple
Imwe yemasevhisi atakatarisira kuona muiyo Big Apple kiyi yaive iyo app TV. Pfungwa ye multimedia sevhisi yaizogadziriswazve neApple, asi isu hatina kuziva kusvika papi. Chinangwa chaApple ndeche simbisa zvese zvemukati zvemultimedia yatinayo panzvimbo imwe. iyo itsva TV app.
Mukushandisa kumwe chete tinogona kuchengeta ese mabhaisikopo, akateedzana, zvinyorwa uye mamwe marudzi ezvinyorwa kubva kune akasiyana masevhisi senge HBO, Spectrum, DirecTV kana Optimum. Saka vanoshanda vanobvisa kusagadzikana, nekuita zvese zvakachengetwa mune imwechete application.
TV: kuyedza homogenize zvemultimedia zvemukati
Iyo app TV inowanikwa mukati Nyika dze10 chaizvo. Pakati pehurukuro vakazivisa kuti ichawedzera kusvika zvimwe zve Nyika zana pasi rese. Chinangwa cheichi chishandiso ndechekubatanidza ese multimedia zvemukati masevhisi mune imwechete application, kuitira kuti dambudziko re "kusaziva zvekuona" kana "kusaziva kwekuriona" rinonyangarika. Apple inoda kuti isu tingoisa chete app uye Ngatifungei kuti tione chii kubva pakupihwa kwatinako.
Sevhisi senge Spectrum, DirecTV, Optimum, Hulu, FuboTV kana sevhisi yePlayStation yakaitwa inoenderana neichi chishandiso, kusanganisira zvese zvirimo nenzira yakafanana mukati meapp.
Basa racho rine Siri kuenderana, zvingave zvishoma sei uye dhizaini yekushandisa yakada kufanana neiyo yandaive nayo, asi yakavandudzwa. Iwo masevhisi avakafonera anozogariswawo TV Channel sezvavari HBO, Hulu, Showtime kana MTV Shows, icho chichava chikamu cheTV app, iri pamwe chete nemamwe ma multimedia zvemukati masevhisi.
Basa racho rinenge richiwanikwa Kubva May munyika dzinopfuura zana. Chimwe chinhu chinonakidza ndechekuti iko kunyorera ichave ichiwanikwa paterevhizheni kubva kumamwe makambani seSamsung kana LG. Uye kuri kuuya kuMac uku kudonha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyo yeApple app, iro ramangwana remultimedia masevhisi kubva kuApple
Apple TV + ndeye Apple inoyerera vhidhiyo sevhisi
Apple Arcade, ndiro zita repuratifomu yemitambo yaApple